Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » Umsi onetyhefu ugquma iDelhi emva komnyhadala wamaHindu
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Umsi onetyhefu ugquma iDelhi emva komnyhadala wamaHindu.
I-Delhi inomgangatho womoya umbi kakhulu kuwo onke amakomkhulu ehlabathi, kodwa ukufundwa kwangoLwesihlanu bekubi kakhulu kuba abahlali besixeko bebebhiyozele iDiwali, umnyhadala wezibane wamaHindu, ngoLwesine ebusuku.
NgoLwesihlanu kusasa, iSalathiso soMgangatho woMoya waseIndiya sinyuke, saya kufikelela ngokumangalisayo kuma-459 kwisikali sama-500.
Usulelo eDelhi ngolwesiHlanu ubuncinci amaxesha ali-10 aphezulu kunosulelo lwaseLondon.
Ukuxinana kwento eyityhefu ye-PM2.5, enokubangela isifo sentliziyo kunye nesifo sokuphefumla, nayo ibethe amanqanaba ayingozi kakhulu.
Isalathiso soMgangatho woMoya waseIndiya sinyuke, safikelela kuma-459 kwisikali sama-500 namhlanje, nto leyo ebonisa ungcoliseko lomoya 'oluqatha' - elona nani liphezulu elirekhodiweyo kulo nyaka.
Ngokwemithombo ye-intanethi, ungcoliseko kwi Delhi ubuncinci amaxesha ali-10 aphezulu kunaseLondon namhlanje.
Abahlali besixeko esilikomkhulu laseIndiya bavuke ngentseni yangolwesiHlanu befumana isixeko sabo phantsi kwengubo yomsi onetyhefu, emva kokuba abantu beziyolo betyeshele ukuvalwa kokusetyenziswa kweziqhushumbisi njengoko izigidi bezibhiyozela umnyhadala wezibane wamaHindu phezolo.
Ukuxinana kwento eyityhefu ye-PM2.5, enokubangela isifo sentliziyo kunye nesifo sokuphefumla, nayo ibethe amanqanaba ayingozi kakhulu. Umbutho wezeMpilo weHlabathi uthatha amanqanaba onyaka e-PM2.5 ngaphezulu kwee-micrograms ezintlanu njengengakhuselekanga, ukanti ngolwesiHlanu, i-metropolis enezigidi ezingama-20 eyomeleleyo ibone umndilili wokufundwa kwesixeko sifikelela kuma-706 eemicrogram. I-Indian Express ibike ukuba amanqanaba e-PM2.5 alinganise i-1,553 micrograms ngo-1 ekuseni ngoLwesihlanu.
Iifoto ze Delhi ekwabelwana ngayo kwi-intanethi bonisa umsi oshinyeneyo omhlophe ophumle ngaphezulu kwekomkhulu, ngokubonakala kuncitshiswe kakhulu.
Delhi inowona mgangatho womoya umbi kuwo onke amakomkhulu ehlabathi, kodwa ufundo lwangoLwesihlanu belubi kakhulu kuba abahlali besixeko bebebhiyozele iDiwali, umnyhadala wezibane wamaHindu, ngoLwesine ebusuku. Abaninzi baye balugatya ukuvalwa komsebenzi womlilo, besongeza imisi eyityhefu ngakumbi emoyeni esele inetyhefu yimithombo engapheliyo.
Ngelixa esi senzo sithintelwe kakhulu, imililo yeendiza - inkqubo yokutshisa ngabom izityalo ezishiyekileyo ukulungiselela umjikelo olandelayo - ikwanegalelo kumazinga abulalayo ongcoliseko lomoya ngeli xesha lonyaka. Ixesha le-Diwali lihambelana nelomlilo, njengoko umthendeleko ubanjwe ekupheleni kokuvuna kwehlobo.
Ngoku ka SAFAR, inyathelo lokubeka iliso lomgangatho womoya phantsi kwe-ofisi yoMphathiswa weNzululwazi yoMhlaba, imililo yeendiza inegalelo malunga ne-35% yemigangatho ye-PM2.5 yaseDelhi.
NgoLwesihlanu, yalumkisa Delhi abahlali bangazilolongi kwaye baphephe ukuhamba. Yathi iimaski zothuli aziyi kubonelela ngokhuseleko olwaneleyo kwaye yacebisa ukuba zonke iifestile kufuneka zivalwe kwaye amakhaya akufuneki acocwe, kodwa afakwe emanzi endaweni yoko.